Faah faahin ka soo baxaysa qarixii Soobe | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Faah faahin ka soo baxaysa qarixii Soobe
Faah faahin ka soo baxaysa qarixii Soobe
Dad aad u farabadan ayaa ku geeriyooday sidoo kale waxaa jira dhawacyo badan kadib Qarax loo adeegsaday gaari laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa oo ka dhacay isgoyska Soobe ee magaalada Muqdisho.
Si rasmi ah looma xaqiijin karo khasaaraha dhabta ah balse goob joogayaal iyo Laamaha Caafimaadka ayaa sheegaya in dad kabadan 30 qof ay ku dhinteen,kuwo kalena ay dhaawacmeen,meydad badan ayaa weli yaala goobtaasi,iyadoo la galay waqti habeen ah.
Waxaaa goobtaasi yaala gawaari aad u badan oo kuwa shacabka ah,kuwaasi oo uu qaraxaasi burburiyay,mashquul xoogan ayaa goobta ka taagan iyadoo ehelada dadkii halkaasi ku waxyeeloobay ay halkaasi dhooban yihiin.
Dadka dhaawacyada soo gaarey ayaa loo daabulay isbitaalada Magaalada Muqdisho waxaana soconaya howlo gurmad ah, dhismayaal badan ayaa ku burburay qaraxa,iyadoo la aaminsanyahay in ay jiraan dadbadan oo dhismayaasha ku hoosjira.
Mas’uuliyiintii goobtaasi tagtay ayaa shacabka Soomaaliyeed ugu baaqey in qofkasta uu ka qeyb qaato gurmadka.
Waxaa la arkayay mas’uuliyiin iyo shacab aad u farabadan kuwaasi oo gaaray goobtaasi,waxaana si wada jir ah looga qeyb qaadanayaa sidii loogu gurman lahaa dadka ku dhibaatoobay mashaqadaasi maanta dhacday.
Gaarigan oo noociisu yahay TM ayaa xiliga uu qarxayay waxaa eryanayay ciidamada Ammaanka kadib markii ay heleen xogta ku saabsan gaarigaasi qaraxa siday,sida uu xaqiijiyay taliska Hay’adda Nabad Sugidda iyo Sirdoonka Qaranka Soomaaliyeed.
Goobta gaarigaasi uu ku qarxay ayaa ah goob aad u mashquul badan,waxaana xiligaasi isticmaalayay gaadiidka dadweynaha iyo shacab kale oo ku mashquulsanaa howl maalmeedkooda.
Next articleR/wasaare Kheyre oo ku baaqay in loo gurmado dadkii ku waxyeeloobay qaraxii galabta ka dhacay Muqdisho